I-RF yobhedu yedayimane | Umatshini wokufudumeza ubushushu | izisombululo zokungenisa ubushushu
Ukufakela kweDaily Diamond Insing
Injongo: Ukufakelwa kwedayimani ye-Brace kwendandatho yokufakela isimbi
imathiriyeli : • Inksimbi yentsimbi kunye nokufakwa kwedayimane • I-Braze shim preform • I-Flux
Izixhobo: DW-HF-15kW, inkqubo yokufudumala, ezixhotywe kwisikhululo sokushisa esikude esinezixhobo ezimbini ze-0.5 μF (i-0.25 μF epheleleyo) I-coil yokupasa ifakwe ekwakheni kwaye iphuhliswe ngokukodwa kule sicelo.
inkqubo: I-multi-turn turn, i-coil yangaphakathi-yangaphandle ye-coil (A) isetyenziselwa ukuvelisa umzekelo wokutshisa ofunekayo. Ukuvavanywa kokuqala kwindandatho yodwa kwinqanaba lokucwangcisa inkqubo. I-Flux isetyenziswe kwinqanaba kwaye i-shims shims ifakwe kwiimingxuma ezithintekayo (B). Oku kulandelwa yidayimani yokwenziwa. Inxalenye ilayishwe kwi-coil kunye nesisindo sifakwe kwiidayimane (C). Amandla okutshisa ama-RF asetyenziswayo ade aqhube umbhobho. Amandla avaliwe kwaye inxalenye yomoya iphoxa kwiqondo lokushisa.
Iziphumo / Iinzuzo • Ukunciphisa iindandatho zokumelana nokulinganisa isithando sobushushu • Ukunciphisa ixesha lokujikeleza ngenxa yokunciphisa amaxesha okugungqa kunye nexesha lokubambisa
iindidi Teknoloji tags ibhanti ephezulu, inkqubo yebhanki ephezulu, ukukhutshwa kwexesha eliphezulu, ukufakwa kwebhondi ye-diamond, idayimani yebhanti, IDF idayim, RF induction brazing, RF inkqubo yokukhangela ibhondi, RF induction brazing unit